Ny milina fanaovana hazo dia karazana fitaovana milina ampiasaina amin'ny fizotry ny asa hazo mba hikarakarana ireo vokatra vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo ho vokatra vita amin'ny hazo. Ny fitaovana mahazatra amin'ny milina fanaovana hazo dia ny milina fanaovana hazo. Ny tanjon'ny milina fanaovana hazo dia hazo. Wood no fahitana voalohany nataon'ny olombelona ...
1. Ny mpandraharaha ny fitaovana, dia tsy maintsy ampiofanin'ny paositra, aorian'ny fizahana ny fanadinana, alohan'ny hahafahan'izy ireo miasa tsy miankina. 2. Ny mpandraharaha milina dia tsy maintsy mahafantatra ny teknolojia, ny fahombiazana, ny firafitry ny fitaovana, ny fomba fiasa, ny fikojakojana ary ny fikirakirana ny ...
Ny fianarana milina dia iray amin'ireo fandrosoana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny informatika ary ankehitriny dia hita fa afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny sehatry ny angon-drakitra sy analytics lehibe. Fanadihadiana angon-drakitra lehibe dia fanamby goavana amin'ny fomba fijerin'ny orinasa. Ohatra, ny hetsika toy ny fahatakarana ny ...